Kukanda simbi pamusoro ndiro uye kuyera zvishandiso Vatengesi uye fekitori - China Kanda simbi pamusoro ndiro uye yekuyera maturusi Vagadziri
Ruoko rwakarukwa simbi pamusoro peplate
Ruoko - rwakaraswa simbi pamusoro peplate Mashandisiro (1) Inokodzera kuongororwa kwakasiyana siyana uye mabhenji ndege ekuyera kwakaringana. (2) Inoshandiswa zvakanyanya seyero yekuyera yemuchina chishandiso chekutarisa uye kuongorora kukura kwehuremu kana kumhanya musiyano nebasa rekuita chaiyo mutsara. (3) Icho chinhu chakakosha chekuyera mukugadzira muchina. Kanda simbi yepamusoro ndiro yakanyanya kushandiswa kumachini, muchina turu bhodhi kugadzira, zvemagetsi, simba remagetsi, ...
Cast Iron Lapping Plates anoshandiswa zvakanyanya pakururamisa ruoko-rwekunamatira kweasina uye asina-feri zvikamu kuti uwane yakakwana fomu fomu & flatness Cast-iron pamusoro mahwendefa izvozvi zvinowanzo shandiswa pane yekugadzira uriri sechishandiso chekurovera girenare pamusoro pemahwendefa kuti uwane zvimwe mamaki ekururama. Iyo simbi inozvibvumira yega kuti iiswe mushonga pamwe nekurova midhiya pamusoro penzvimbo huru yakati sandara. Iyo yepamusoro inogona kuve yakajeka yekumusoro pamusoro pekukapa, kumaka uye kuronga mashandiro. Zvakare pamusoro surf ...
T slotted cast iron surface plate yedu T-slotted cast iron / simbi pasi mahwendefa anoshandiswa seyakaomarara uye akajeka mabheseni muinjiniya maindasitiri ekumisikidza, dhizaini, kuyera kwakaringana, basa regungano, kusimudzira mabasa ezvigadzirwa zvemagetsi, kugadzirisa zvekare nezvimwewo. marata esimbi anokwanisa kushandiswa semabhedhi emubhedha ezvigayo zvinofinha, gantry yekugaya / yekuchera michina nezvimwewo zvinoshandiswa semibhedha yekuyedza kutsigira injini, mota, compressors, pombi, mavhavha, michina mikuru, kutumira ...